Wararka - Dhowr arrimood ayaa caawiya ISO New England Cimilada adag ee Jiilaalka
Arrimo heer gobol iyo caalami ah, oo lagu daray diyaar garowga iyo cimilada qabow oo dib u dhacday, ayaa ka caawisay ISO New England inay ka badbaado xilliga qaboobaha ee 2014-15 iyadoo ay yaraadeen arrimaha hawlgalka iyo qiimaha aadka u hooseeya, ISO ayaa sidaa sheegtay Jimcihii.
Warbixin ay u direen Gudiga kaqeyb galayaasha korontada ee New England, Vamsi Chadalavada, kuxigeenka madaxa fulinta ee ISO New England iyo sarkaalka howlgalka, wuxuu xusay in qiimaha celceliska deegaanka ee maalinlaha ah ee ISO uu ahaa $ 64.25 / MWh bishii Maarso, hoos udhaca 45.7% laga bilaabo Febraayo iyo hoos 42.2% laga bilaabo Maarso 2014.
Diyaargarowga ka caawiyay ISO New England sanadkan waxaa ka mid ahaa Barnaamijkeeda Isku halaynta Jiilaalka, sida lagu sheegay warbixinta, oo lagu abaalmariyey koronto-dhaliyeyaasha inay keydiyaan shidaal ku filan ama qandaraas ku siiyaan gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah, sida lagu sheegay warbixin loo soo bandhigay daneeyayaasha.
Qiyaasta caalamiga ah ee LNG, oo ay weheliso qiimaha gaaska dabiiciga ee sare ee gobolka xilliga qaboobaha 2013-14, waxay sababtay in LNG badan laga helo gobolka.
Hoos u dhaca qiimaha saliida ee dhacay tan iyo xagaagii la soo dhaafay ayaa ka dhigay “jiilka saliida shidaalka inta badan ka dhaqaale badan inuu ordo marka loo eego jiilka gaaska dabiiciga laga dhaliyo… [taasoo] hoos u dhigeysa isbedelka qiimaha gaaska iyo korontada labadaba,” ayay tiri ISO.
Celceliska qiimaha gaaska dabiiciga ee aagga New England wuxuu ahaa qiyaastii $ 7.50 / MMBtu bishaan Maarso, marka la barbardhigo qiyaastii $ 16.50 / MMBtu bishii Febraayo, ISO ayaa sidaas tidhi.
New England waxay qabatay Diisambar khafiif ah, cimilada ugu adkeydna dib ayey u dhacday illaa Febraayo, “markii maalmihii dheereen oo isticmaalka korontadu ka hooseeyay,” ayay tiri ISO.
New England waxay lahayd qiyaastii 3% maalmo shahaadooyin kululayn ah oo dheeri ah laga bilaabo Diseembar illaa Febraayo, marka la barbardhigo isla muddadaas 2013-14, laakiin wadarta guud ee HDD ee Diseembar waxay qiyaastii ahayd 14% wax ka yar Diseembar 2013, halka wadarta HDD ee Febraayo ay ahayd 22% in ka badan bishii Febraayo 2014.
Cunsurka kale ee kajira ISO New England qabow daran ayaa ahaa waxtarka tamarta, xiirashada wadarta isticmaalka awooda iyo baahida ugu sareysa, ISO ayaa tiri.
ISO New England wuxuu cunay qiyaastii 10.9 Twh bishii Maarso, marka la barbardhigo 11 Twh labadaba Febraayo iyo Maarso 2014, sida lagu sheegay warbixinta.